Misia foana ny frankofonia | NewsMada
Par Taratra sur 17/11/2016
Mahavariana tokoa isika amin’ny trangan–javatra samihafa. Samy mandroritra izay tandrify azy, samy miteny ny fahitany azy, samy milaza izay tiany ho lazaina. Asa tokoa raha izany ny fiarahamonina iainana, ankehitriny, na efa nolovaina hatramin’izay, na izany mihitsy isika Malagasy.
Ho avy ity ny frankofonia, manome toromarika ny mpitondra. Niainga tamin’ilay tsy fampianarana ny mpianatra. Natao teny midina, fa tsy nisy ny fifampidinihana na nifampierana ny “tena antony” hampitsaharana ny fampianarana. Iaraha-mahalala fa ho avy ny fotoam-pahavaratra, hirotsahan’ny orana, hiavian’ny loza voajanahary (sanatria), ho maro ny sekoly hampiantrano ny traboina, tsy ahafahan’ny mpianatra manohy ny fianarana, ary tsy ho araka ny famitana ny fandaharam-pianarana. Tsy misy fepetra manokana raisin’ny fanjakana manoloana izany. Izao ka terena tsy hianatra ny mpianatra any Bekily, na Beraketa, na Vohémar, sns, fa hoe “iaraha-miaina ny frankofonia”. Nambara fa “malalaka ny sekoly tsy miankina amin’ny safidiny”, ary nanapa-kevitra avy hatrany ny ao amin’ny katolika fa hanohy hianatra izy ireo.
Eo ihany iny, fa tena niteraka resabe ity fepetra samihafa mandritra ny fivoriambe ity. Tsy miasa ny mpitarika posy, tsy mahazo manahy lamba, tsy mitondra kapa, tsy mahazo mivezivezy ny “scooter”, sy izay rehetra tsy azo atao koa,…. Mamono afo ny mpitondra avy eo, milaza indray fa “azo atao, izao na izaroa,…”, “lalàna efa nisy fa hamafisina ny fampiharana azy,….”. Koa tsy aleo hisy mandavantaona ny frankofonia, mba hihatra amin’ny rehetra ny lalàna, tsy hisy ny kolikoly, ho voasazy ny mpanapotika ny Jirama, ny mpanao trafika andramena, ny mpandripaka sy manao ampihimamba ny vatosoa, ny mpahazo tsenambaro-panjakana natao kiantranoantrano tsy ara-dalàna, sy izay any anaty eritreritry ny mpamaky any.